Gaari Qarax culus wada oo lagu qabtay bartamaha Magaalada Boosaaso * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada amaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa shalay gabal dhicii fashiliyey qarax la soo bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Qaraxan ayaa waxaa la dhigay halka loo yaqaano isgoyska Gaaca oo ka tirsan suuqa magaalada Boosaaso, iyadoo ciidamada amaanku ay xireen goobtaas.
Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Bari ayaa warbaahjintaa u sheegay in qaraxan uu ahaa mid tankiisa weyn yahay, balse ay suurtagashay inta aan dhibaato lagu gaarsiin shacabka.
Waxaa uu intaas ku daray iney weli socdaan Howlgalada ay wadaan ciidamada ammaanka lagu xaqiijinayo.
Qaraxa la qabtay ayaa tankiisa lagu qiyaasay 100-kg sida ay sheegeen Saraakiisha amaanka ee Maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso, waxayna xuseen in qaraxaas uu geysan lahaa burbur iyo khasaare xoogan haddii aan laga horegi laheyn.
Bilowgii todobaadkan ayey aheyd markii magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Zoope uu ka dhacay qarax laga soo buuxiyey gaari xamuul ah oo saldafay nolosha dad 300 ka badan, dhaawaca boqolaal kale iyo burbur aad u badan.